Posts – Bible Study
भजनसंग्रह ७२ यो खण्ड भजनसंग्रहको दोस्रो खण्डको अन्तिम अध्याय हो । यहाँ १९ पदमा आमेन शब्दमा समापन भएको छ । यस भजन पनि ख्रीष्ट–केन्द्रित भजन हो जसले मसिहको राज्यको विषयमा...
Pradeep Thapa March 10, 2021
५. तिमीहरुले यी सब कुरा एक पल्ट जानेकै थियौ, तापनि अहिले म तिमीहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कि मिश्रदेशबाट बचाएर ल्याइएका मानिसहरुमध्ये विश्वास नगर्नेलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट पार्नुभयो ।यस्तो होइन कि...
Pradeep Thapa January 2, 2021
३. प्रिय हो हामी सबै सहभागी भएको उद्वारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु, त्यसैले सन्तहरुलाई सदाकालको निीम्त सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरुलाई लेख्न मैले आवश्यक...
Pradeep Thapa January 1, 2021
यहूदाको पुस्तक आज हामी विश्वासीहरुको निम्ति लेखिएको हो । आजको मण्डली युगमा यो पुस्तक अत्यन्त सान्दर्भिक छ । “प्रेरितको पुस्तक” प्रेरितहरुको कामको विषयमा थियो भने यस पुस्तक भूmटा प्रेरित वा...
Pradeep Thapa December 31, 2020
प्रथमा पटक पावल थेसलोनिकीमा हुदा त्यहाँ धेरै समय बस्न सकेनन् । उनलाई पक्रिने योजना भएकोले आफ्नै सुरक्षाको लागि भएपनि केही हप्तापछि नै तुरुन्तै त्यहाँबाट जानुप¥यो । पावल गइसकेपछि त्यहाँका विध्रोहीहरुले...
Pradeep Thapa December 18, 2020
पद १०. एक सेवकले केवल बोलीवचनमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि देखाउन आवश्यक हुन्छ । आफ्नो बोली वा सिद्धान्तको अधिकारमा हक राखी सेवा गर्नुभन्दा ख्रीष्टको आत्माद्वारा डो¥याइएर उदाहरण हुनु आवश्यक छ...
पद ५. परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको वचन र उहाँको आत्मालाई कहिल्यै अलग गराउन सक्दैनौँ (एफि. ६ः१७) । पवित्र आत्माको स्वरुपमा उहाँले आपैmलाई हामीमाँझ दिनुभएको छ (१ थेस. ४ः८) । उहाँको बेवास्ता...
Pradeep Thapa December 13, 2020
ख. बाइबलले परमेश्वरको अस्तित्व मानिलिन्छ बाइबलले यो कुरा मान्दछ गर्दछ कि सबै मानिसले परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् । यसले परमेश्वरको अस्तित्व प्रमाण गर्ने प्रयास गर्दैन । बाइबलको सुरुवात यसरी हुँदछ,...
Pradeep Thapa December 1, 2020
आजभोली “परमेश्वर” शब्दको प्रयोग धेरै प्रकारले गलत अर्थमा भएको छ । ईसाई जगतमा परमेश्वर शब्द सही ढङ्गमा बुझ्न आवश्यक छ । यस शब्दको केही बेठीक बुझाईहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न कोसिस...
पुरानो करारमा इस्राएलीहरुलाई केवल एक परमेश्वरको मात्र आराधना गर्न आज्ञा गरिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो भनी सोध्दा येशूले भन्नुभयो, “हे ईस्राएल, सुन, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा...
Pradeep Thapa November 27, 2020